Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen oo ogolaaday inay ka baxaan magaalada Xudeydah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen oo ogolaaday inay ka baxaan magaalada Xudeydah
February 18, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Qaramada Midoobay oo waan waan ka dhex waday Xulafada Sacuudiga iyo kooxda Xuuthiyiinta ayaa Axadii shalay shaacisay in lagu guuleystay wajiga hore ee ka bixitaanka ciidamada ku dagaalamaya magaalada xeebta saaran ee Xudeydah.
Labada dhinac ayaa bishii December ee sanadkii tagay ku heshiiyey shir ay ku yeesheen dalka Sweden in ay ciidamadooda ka saaran magaalada Xudeydah, inkastoo xabad joojintii lagu saxiixay shirkaasi inteeda badan dhaqan-gashay balse waxaan weli lagu guuleysan in magaalada laga saaro maleeshiyaadka iyo ciidamada halkaasi ku dagaalamaya.
Qorshahan cusub ayaa ah in marka hore kooxda xuuthiyiinta ay maleeshiyaadkooda kala baxaan magaalada iyo waliba sadexda dekaddood ee halkaasi ku yaal ee Hodeidah, Saleef iyo Ras Isa. Kadibna halkaasi iyaguna ciidamadooda kala baxaan xulafada Sacuudiga iyo Imaaraatiga.
Amniga magaalada Xudeydah ayaa la sheegay in lagu wareejin doono ciidamo madani ah oo deegaankaasi kasoo jeeda.
Dekaddaha Xudeydah ayaa ahaa isha dhaqaalaha iyo halka laga dejiyo mucaawinada dalkaasi la geeyo, waxayna dagaaladaasi saameyn weyn ku yeesheen shacabka dalka Yemen oo la sheegay in 18 milyan oo kamid ah u baahan yihiin xiligan gurmad deg deg ah.